विप्लवले प्रचण्डलाई मार्ने रिर्पोट प्रहरीले सुनाउनु गल्ती « Janata Samachar
विप्लवले प्रचण्डलाई मार्ने रिर्पोट प्रहरीले सुनाउनु गल्ती
पूर्व डीआईजी मल्ल भन्छन्– प्रहरी र सरकारबाट हतारमा प्रतिबन्धको निर्णय
प्रकाशित मिति : 15 March, 2019 7:02 pm
सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै, नेपाली मिडिया, राजनीतिक नेतृत्वदेखि समाजमा समेत मतभेद देखिएको छ । जनता टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम सन्दर्भमा सहकर्मी सइन्द्र राईसँग पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल भने सरकारकै कारण यस्तो मतभेद सिर्जना भएको निष्कर्ष सुनाउँछन् । भन्छन्– प्रहरी संयन्त्र र सरकारले हतारमा प्रतिबन्धको निर्णय लिएको छ । प्रस्तुत छ, सम्वादको संम्पादित अंशः
शान्ति र स्थीरताको लामो चाहनापछि मुलुकमा संघीय गणतान्त्रिक संविधान आयो । तर, फेरि अशान्तिको भय देखिन थालेको छ । के नेपाल फेरि डराउनैपर्ने अवस्थामा पुगेको हो ?
–सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछिको सन्देश चाँही अवस्था हद भन्दा बाहिर गएको हो कि भन्ने सन्देश दिन्छ । तर, मलाई चाँही सरकारले अलिक हतारमा निर्णय लियो कि ? अथवा आवश्यक नै होइन किजस्तो लाग्छ ।
यसको अर्थ अहिले विप्लवको गतिविधि प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने तहको होइन ?
–प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने तहको होइन । किनभने, हामीले ०५२ साललाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला माओवादीले जनयुद्ध घोषणा गरेरै अगाडि बढेको थियो । त्यसबेला प्रतिबन्ध लगाउनैपर्ने स्वभाविकै थियो । तर, आज विप्लवको गतिविधि र प्रहरी कार्बाही हेर्दा प्रतिबन्ध नै किन लगाउनुपर्ने अवस्था देखिन्न ।
कुनै मानक (कुन तहको गतिविधि) छ कि त्यो तहमा पुगेपछि प्रतिबन्ध लगाउने ?
–एक्स्ट्रिममा लगाएर भ्यूज् अथवा नीति राखेका थिए भने ठीकै हो । तर, उनीहरुले युद्धको कुरा गरेका छैनन् । चन्दा माग्नेहरुलाई प्रहरीले कार्बाही गरिरहेको थियो । विप्लवपछि दोस्रो तहका नेता प्रकाण्ड नसमातेको होइन । कसरी र किन छोडे भन्ने राजनीतिक कारणमा नजाऊ । बम बिस्फोट गराउँदा मानिसको मृत्यु भयो । तर, तत्कालै प्रहरीले तिनलाई नियन्त्रणमा लिएकै छन् ।
प्रहरी अपराधका घटना नहुन् भन्नेमा छन् । अपराध नै नहुने भन्ने त हुन्न । कार्बाहीकै तह अगाडि बढाइरहेकै थियो । यसले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो भन्ने लाग्दैन ।
प्रतिबन्धको निर्णयले आम तहमा जसरी त्रास सिर्जना गरेको छ । सरकारले यस्तो कदम चाल्ने बेला भएको थिएन भन्ने निष्कर्ष हो तपाइको ?
–हो । तर, प्रतिबन्धको निर्णयले आम मनोविज्ञानमा असर चाँही पार्छ ।
प्रहरी संयन्त्रले नै त रिर्पोट दिने होला नि त सरकारलाई यो तहको निर्णयमा पुग्नुपर्छ भनेर । प्रहरी पनि आत्तियो ?
–सुरक्षा संयन्त्रकै सिफारिसमा सरकारले निर्णय लिने हो । सिफारिस गरेपनि निर्णय लिने सरकारले नै हो । अहिले सुरक्षा संयन्त्रको सिफारिमा छलफल नभई निर्णय लिइएको हो कि भन्ने कुरा नेकपाका नेताहरुबाटै आएको असन्तुष्टिले पुष्टि गर्छ । त्यसैले पनि यो निर्णय हतारमा भएको भन्ने लाग्छ, मलाई ।
विप्लवले युद्धको घोषणा नगरेपनि अन्ततः ऊसको कुरा त त्यही थियो । सरकारसँग कुनै विकल्प थियो ?
–भइरहेकै त थियो । घटना भएपछि मानिस समातिएकै छ, कार्बाही भएको छ । यस भन्दा माथि उठेर थुप्रै कार्यकर्ता समातिएको छ । मान्छे मर्दा त्यही तहको कार्बाही भइरहेकै छ । अनि अहिले जस्तो शान्ति सुरक्षाको अवस्था छ, सरकारले प्रतिबन्धकै तहमा पुग्नुपर्ने अवस्था होइन ।
धम्की दिएर चन्दा उठाउने अनि ऊ समातिने । तर, फेरि छोडिने कुराले समाधान भइरहेको थियो र ?
–अहिलेको सुरक्षा संयन्त्रलाई बलियो बनाउने र त्यसैअनुसार कार्बाही प्रक्रिया अगाडि बनाउनु नै उपयुक्त हुन्थ्यो ।
राजधानी उपत्यकामै लगातार बम विस्फोट हुन थालेपछि नेपाल प्रहरी नै अलिक छिटो आत्तिएको हो कि ?
–हो, प्रहरीबाट पनि हतारमा निर्णय भयो कि ? प्रहरी केहिले केही जिम्मेवारीमा अल्झिरहेको छ । यो तीन वर्षमा अपराधको ग्राफ बढेको छ । अनुसन्धानमा समस्या आएको छ । र, अर्को प्रहरी संघीयतामा गइरहेको छ । त्यो थुप्रै विधेयकमा प्रहरी अल्मलिएको छ । तर, फेरि प्रतिबन्धको निर्णयले प्रहरीमाथि नै दबाव बढ्छ ।
प्रहरी नेतृत्वले चाहेको भए प्रतिबन्धको निर्णय रोक्न सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो ?
–सुरक्षा संयन्त्रमा महत्वपूर्ण निर्णयको अधिकार विभागीय प्रमुखकै हुन्छ । छलफलमा सरकारले गर्ने निर्णय कहिलेकाँही विभागीय प्रमुख नचाहेर पनि हुन्छ ।
२०५२ र अहिलेको अवस्था कुन खतरानक छ ?
–त्यो बेलाको माओवादीसँग हतियार थिएन । राजनीतिक विचार लिएर अगाडि बढेका थिए । लठ्ठी, मुङ्ग्रो, भरुवा लिएर लडेका थिए । अनि, प्रहरीको हतियार खोस्दै अगाडि बढेका हुन् ।
तर, त्यही माओवादी शान्ति सम्झौतामा आएपछि कति हतियार बुझाए र कति बुझाएनन् भन्ने लेखाजोखा छैन । अहिले आधुनिक हतियार भेटिदै आएको छ । यो राम्रो लक्षण होइन ।
त्यसबेला, जनतामा आक्रोश थियो– विशेषगरी राजसंस्थाप्रति । तर, आज त्यो अवस्था छ र ?
–छिमेकी देशका प्रधानमन्त्रीहरुलाई हदै तल्लो तहसम्म झरेर गाली गर्थे । अहिले नेपालका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध त्यसरी नै गाली गर्न थालेका छन् । सामाजिक सञ्जालहरु हेर्नोस् । राष्ट्रपति हाम्रो सम्मानित संस्था हो । तर, राष्ट्रपतिविरुद्धको आक्रोश हेर्नोहोस् त । यो भनेको जनतामा आक्रोश छ ।
अर्थात्, यो आक्रोशित जमात सरकारले प्रतिबन्ध लगाएकै पार्टीतिर जान सक्छ ?
–नजान सक्छ । तर, सरकारविरुद्धको मनोविज्ञानले एक किसिमको जनमत तयार गर्नसक्छ । अर्को, युएनको मापदण्डमा नपरेका पूर्व लडाकूहरु छन् । तिनीहरुसँग पनि भोलि डर हुनसक्छ । त्यसैले मैले २०५२ भन्दा अहिलेको अवस्था डरलाग्दो देखेको हुँ । किनभने, आजको जनताको जनता र आवाज एक्स्ट्रिममा गएको छ । २०५२ को जनमत यो तहको थिएन ।
यो प्रतिबन्धले त्यो एक्स्ट्रिमलाई निरुत्साहित बनाउछ वा अझ बढाउछ ?
–प्रतिबन्धले राम्रो गर्दैन । अहिले मिडियामा मतभेद छ, नेकपामा मतभेद छ र जनता पनि ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई विप्लवले मार्ने लिष्टको एक नम्बरमा राखेको भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिनुभयो । यो कति तथ्य नजिक हुन सक्छ ?
–यदि, हो भनेपनि यस्तो कुरा बाहिर ल्याइदिनु हुँदैनथ्यो । राष्ट्र प्रमुखहरुका लागि त सुरक्षा निकाय खटिएको छ । अव, उनीहरु नै सुरक्षित छैनन् भनेपछि अरुले के सोंच्लान् ?
मार्ने लिष्ट नै तयार भएको हो भनेपनि सुरक्षा निकायले आफू खटेर सूचना रोक्नुपथ्र्यो ?
–रोक्नुपर्छ । यस्तो समाचारले समाजमा राम्रो असर गर्दैन ।
यस्तो सूचनाले राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि आत्तिने र हतारमा निर्णय गर्ने अवस्था बनिदिन्छ ?
–हो, बनिदिन्छ ।
तपाइलाई यो तहको योजना विप्लवले बनाउन सक्छजस्तो लाग्छ ?
–हुनसक्छ । किनभने, विद्रोहीले माथिल्लो तह नै टार्गेटमा राख्छ । किनभने, माथि भत्किएपछि तल भत्किन्छ ।
‘दलाल पुँजीवादसँग सहकार्य गरे नेकपा सकिन्छ’
तत्कालीन माओवादी र एमालेको भागमा परेका जिल्लाको नेतृत्व भागबन्डा गर्नु थियो भने यति ढिलो गर्नु
क्रान्ति सिंगो राष्ट्रले गर्छ, एउटा पार्टीले मात्र गर्ने होइन: मार्क्स
मेरो बारे जति धेरै झुठो प्रचार गरियो र असत्य लेखियो, यदि मैले ती सबै झुठहरुको
जिल्ला कमिटीको मापदण्ड अनेरास्ववियुमा कल्पना नगरौँ
पार्टीको नर्सरीको रुपमा हेरिने जनवर्गीय संगठनको एकता साँच्चिकै हार्दिकताका साथ सम्पन्न गर्न बरु पार्टी चिन्तित
क्रियाशीलतामै विश्वास गर्छु
यज्ञ बोगटी सुदुरपश्चिमको दुर्गम पहाडी जिल्ला अछामको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित संघीय सांसद
२०७६ जेठ ४ गतेको राशिफल
मेष– व्यस्तता बढ्नेछ, काममा सफलता मिल्नेछ । वृष– कुटुम्ब सहयोग मिल्नेछ, भोजनको सुख पाइनेछ । मिथुन– सहयोगमा दिन बित्नेछ, मित्रजन भेटघाट हुनेछ…
‘ह्वाइट थ्रोटेड रेल’ चरा र पुनर्जन्मको…
शिकारीको नजरबाट मुक्त आइल्याण्डमा चुनौती नभएकोले ‘ह्वाइट थ्रोटेड रेल’ चराको प्रजाति फैलिँदैछ ।
‘राष्ट्रपतिको सम्बोधनप्रति कांग्रेसले स्यालहुईयाँ मच्चायो’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकभित्र राष्ट्रिय एकता कायम हुन नदिने षडयन्त्र भइरहेको बताउनुभएको छ ।
ट्याङ्करले फेरि मान्छे मार्यो
ट्याङकरले फेरि मान्छे मारेको छ । सिभिल मल अगाडि शुक्रबार पानी बाेक्ने ट्याङकरले किचेर महिलाको मृत्यु भएको छ ।
‘कम्युनिष्ट आन्दोलन विफल पार्न मदन–आश्रितको रहस्यमय…
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मुलुकमा कम्युनिष्टको बहुमत सरकार बन्नुमा जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको योगदान रहेको बताउनु भएको छ ।
जननेताको स्मृतिलाई सार्थक बनाऔं : प्रधानमन्त्री
नेताद्वय मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको २६ औं स्मृति दिवशको अवसरमा प्रधामन्त्रीले नेताद्वयलाई सम्झिनुभएको हो ।
क्रुरताको पराकाष्ठा: जेठाजुले यसरी गरे बुहारीको हत्या (भिडियाेसहित)
मोटरसाइकलको नम्बर प्लेट राख्न नपाउँदै दुर्घटना, चालकको मृत्यु
किन जलाइयो मेयरकाे करोड परेकाे गाडी ? (भिडियोसहित)
नारायणकाजी जोगी बन्न लाग्दा रोके प्रचण्डले
विवाहको तीनदिनअघि आफैँले सिन्दुर लगाएर आत्महत्या
१६ वर्षीय छोरीलाई घरमा थुनेर बुवाआमा विवाहमा गएपछि....
बुटवलमा प्रभु बैंकको एक्सटेन्सन काउण्टर
सञ्चार क्षेत्र नियन्त्रण गर्न एन्टिभाइरस्ः मुख्यमन्त्री
भुरिगाउँ हत्याकाण्ड ‘बुबा मार्ने गुणरत्न पहिलो अभियुक्त’
छोरीको हत्या गर्ने आमा पक्राउ
भ्यान र ट्रक जुध्दा आठ जनाको मृत्यु
कोइराला सम्झिए कांग्रेस नेताले